गीतकार करिश्मा घम को "मुटु"बिमोचन मा रोयल्टी को बहस सुबास रेग्मी भन्छन प्रोडुसर र प्रफर्मर को एउटै कित्ता। - Ek Jamarko
Home / समाचार / गीतकार करिश्मा घम को "मुटु"बिमोचन मा रोयल्टी को बहस सुबास रेग्मी भन्छन प्रोडुसर र प्रफर्मर को एउटै कित्ता।
गीतकार करिश्मा घम को "मुटु"बिमोचन मा रोयल्टी को बहस सुबास रेग्मी भन्छन प्रोडुसर र प्रफर्मर को एउटै कित्ता।
बेलायतमा बस्दै आएकी गीतकार करिश्मा घमको दोस्रो गीति अडियो ‘मुटु’ राजधानीमा एक समारोहबिच सार्वजनिक गरिएको छ । विदेशी भूमिमा बसे पनि स्वदेशको सम्झनामा कलम चलाउँदै आएकी गीतकार घमले यसअघि ‘गुनासो’ नामक एल्बम ल्याएकी थिइन् ।विन्ध्यवासिनी म्युजिकद्धारा आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथी गीतकार डा. कृष्णहरी बराललगायतले एल्बम सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रममा एल्बमका संगीतकार राजेश थापाले एल्बमभित्र रहेका गीतबारे प्रकाश पार्दै गीतकार घमले बेलायतबाट पठाएको सन्देश पढेर सुनाएका थिए । त्यस्तै संगीतकार संघका अध्यक्ष लक्ष्मण शेषले एलबमका गीतको सांगितीक पक्षको समिक्षा गर्दै संगीतकार थापाको सिर्जनाको प्रशंषा गरेका थिए भने गीतकार डा. बरालले गीती पक्षको समिक्षा गर्दै घमको शाब्दिक सिर्जनाको तारिफ गरेका थिए।
समारोहमा संगीतकार संघका अध्यक्ष शेषले नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा ठुलो लगानी भईरहे पनि त्यो लगानी कहाँ गईरहेको छ र किन फिर्ता हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठाए । यसैको प्रतिउत्तरमा बिन्ध्यबासिनी का संचालक सुबास रेग्मी ले पछिल्लो समय संगीत क्षेत्रको लगानी को प्रतिफल "प्रफमर"ले मात्र पाएको र प्रोडुसर लगानीकर्ता हरु डुबेको दाबि गरे / रेग्मी ले बौदिक सम्पत्ति माथिपनि प्रफमर कै आधिकार हुनी प्रोडुसर को लगानी को प्रतिफल पनि प्रफमर ल मात्र पाउने आनौठो भएको कुरा ब्यक्त गर्दै प्रोडुसर र प्रफमर को एउटै कित्ता हुनु पर्ने कुरा मा जोड दिएका थिय /
विमोचित एल्बममा एउटा म्युजिक ट्रयाकका साथ मुटु माझ, नेपालकी छोरी, तिमी मेरो, आंशु लुकाई, तिमी छ्यौ र जहिलेदेखि बोलका आधा दर्जन गीत छन् । जसमा घामको एकल शव्दरचना र राजेश थापाको एकल संगीत छ भने राजेशपायल राई, स्वरुपराज आचार्य, अञ्जु पन्त, दीपक लिम्बु, रजिना रिमाल, मिलन अमात्य र मेलिना राईले स्वर भरेका छन । कार्यक्रममा एलबममा संगृहित आंशु लुकाई बोलको गीतमाथि बनाइएको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । भिडियोको निर्देशन सुवास रेग्मीले गरेका छन् भने यसमा गजित विष्ट र अनु शाहले अभिनय गरेका छन् ।
गीतकार करिश्मा घम को "मुटु"बिमोचन मा रोयल्टी को बहस सुबास रेग्मी भन्छन प्रोडुसर र प्रफर्मर को एउटै कित्ता। Reviewed by Jamarko TV on दिसंबर 19, 2015 Rating: 5